I-China YF-HY-2 11 abakhiqizi ngaphandle kwengilazi Umkhiqizi nomhlinzeki | Yifan
Abadwebi be-YF-HY-2 11 ngaphandle kwengilazi
Kulezi zinsuku, amatafula angamampunge ancintisana nezinto zefenisha ezinentengo ephezulu maqondana nentengo. Akekho ozovimbela umuntu ukuthola uma ukwazi ukusebenzisa ize yokwenza izimonyo. Uma kwenzeka okwamanje ufuna ize, ngiyajabula ukukhombisa izinketho ezimbili.
Kulezi zinsuku, amatafula angamampunge ancintisana nezinto zefenisha ezinentengo ephezulu maqondana nentengo. Akekho ozovimbela umuntu ukuthola uma ukwazi ukusebenzisa ize yokwenza izimonyo. Uma kwenzeka okwamanje ufuna ize, ngiyajabula ukukhombisa izinketho ezimbili. Thenga isibuko sodonga bese usetha isihlalo futhi netafula lokudlela elihle nenethezekile. Yilokho ukuthi ize yakho yefantasy isizophela. Okwesibili, thenga okokukhipha okunesitoreji esilinganiselwe noma thenga iziqukathi ezimbalwa zepulasitiki bese uyisebenzisa ndawonye kulokhu okungenamsebenzi.
Ingabe ukubhekana nezinkinga isikhala efulethini lakho elincane? Wake wafuna ikona lakho? Ngabe udinga isikhala esithe xaxa sokugcina izimonyo zakho, amakha, kanye nezinto zokwenza izimonyo? Ungowesifazane futhi ufuna ukubukeka umuhle nsuku zonke, futhi siyakuqonda. Kungakho sinempendulo obukade uyifuna! Isethi yethu yokwenziwa okuyize kwekhoneni iza nesibuko esimi kathathu ukuze uhlole yonke imikhakha yobuso bakho. Ungalokothi ucabange ngokuthi "ungabeka kuphi" izimonyo zakho futhi. Iza nabadwebi abangu-11 abakunikeza isikhala esiningi kunaleso osidingayo.
Yenziwe ngokhuni olumhlophe izongena kunoma iliphi igumbi ngoba sonke siyayazi, umhlophe uhamba nanoma yini. Yakhelwe kuphela ngezinto ze-premium.
Sifundise ngawe, noma ngabe uyindoda! Ungayithengela umkakho, intombi noma indodakazi yakho. Sikholelwe, isimanga esiphelele!
Beka itafula lakho le-chic kumadilowa aqinile ukuze ubukeke ngokuphelele. Ifaka ama-drawer angu-4 asondelene (2x) aqokonyiswa ngezinkinobho zethu zekhabethe leCrystal Lux
Usayizi: 150 * 60 * 80cm
Usayizi wedrowa: 43 * 15.6 * 60cm
Isibuko Esinosayizi Oyisisekelo 45.75 "W x 12.75 'D x 32.5" H
Isibuko esingenawo ama-Base Dimensions 43.25 "W x 2.75" D x 31.5 "H
Umbala: Okumnyama, okumhlophe, okubomvana (kutholakala kusiginesha yethu i-Glossy White, i-Pro Black, i-Shimmery Silver, i-Champagne Gold, ne-Rose Gold premium)
sisekela i-OEM yobukhulu nombala, sicela ukhulume nesevisi yamakhasimende
Ubukhazikhazi bobuhle baseHollywood ngobuciko bayo obulula obenze abathandi bezimonyo abangenakubalwa, abasebenza ngobuhle nababhlogi be-beauty bathandana. Joyina izinkulungwane zama-vanitistas ajabule futhi uvumele ukukhanya kwakho kwansuku zonke!
Langaphambilini YF-HY-1 13 abadwebi
Olandelayo: Abadwebi be-YF-HY-3 3
I-Crystal Hollywood Glow Vanity
IHollywood Classic Vanity Mirror
IHollywood Makeup Vanity Australia
IHollywood Vanity Mirror Enamalambu
IHollywood Vanity Station
I-Hollywood Vanity Table Set
Isitayela Sesimanje I-Hollywood Vanity Makeup Mirrors
Abadwebi be-YF-HY-4 8
I-Hollywood iyize YF-D-1
Abadwebi be-YF-HY-5 5
YF-HY-1 13 abadwebi
Abadwebi be-YF-HY-3 3
I-Hollywood iyize YF-C-1